ဧည့်ခန်းများအတွက် track Lighting ကရိယာ - LED ကို Down Light က, LED ပြောက်အလင်း,,LED ကို Track အလင်း,LED ကိုရေလွှမ်းမိုးအလင်း,LED ကို Linear အလင်း,LED လမ်းအလင်းစက်ရုံထုတ်လုပ်သူ
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » ဧည့်ခန်းများအတွက် track Lighting ကရိယာ
ထုတ်ကုန်အမည် ဧည့်ခန်းများအတွက် track Lighting ကရိယာ
We are also professional aluminum profile manufacturer, all our engineer and workers are experienced with more than 8 နှစ်အတွေ့အကြုံ.
တစ်ဦးက: ဟုတ်ကဲ့, sample is workable, one sample or mixed samples are okay.
တစ်ဦးက: It depends on the stock, usually sample order is 3-5 days and mass order is 7-15 days after we confirm the payment.
တစ်ဦးက: We usually ship by DHL, UPS, FedEx or TNT. It usually takes 3-5 days to arrive. Airline and sea shipping also optional. Or we can send to your forwarder in China.